Posted by Zaw Thwin Sex Blog
“ဟေ့ကောင် စိုးကြီး လီးရစ်ရှည်မနေနဲ့တော့ လူတွေရောက်လာမှ လီးတွေဖြစ်ကုန်ဦးမယ်”
” မြန်မြန်ဖြုတ်လိုက်တော့ ပြီးရင်လစ်မယ်ဟေ့ကောင်”
ကောင်မလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ ကောင်မလေးလည်း ကောင်းနေသလား ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ သတ်ချင်နေသလားဆိုတာကိုတော့ စိုးကြီးလည်း သေချာမသိနိုင်ပါချေ
ကောင်မလေးကို လျှော့ပစ်ဖို့ စဉ်းစားပြီး ခါးကြားက သေနပ်ကို ကိုင်လိုက်သည်.
“မသတ်ပါနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ် ရှင်တို့ လူကိုလည်း လိုးပြီးပြီပဲ မသတ်ပါနဲ့နော်”
“နင့်ကိုမသတ်ရင် နင်က ငါတို့ကို တိုင်ရင်ငါတို့ အဖမ်းခံရမှာပေါ့ ဆောရီးပဲ ကောင်မလေး”
ကောင်မလေး ခေါင်းကိုတည်ပြီးတော့ ခလုတ်တစ်ချက်ညှစ်လိုက်လေသည်.။
ညဘက်ဆိုသော်ငြား လူနေကင်းမဲ့သော ခရီးဝေးတစ်နေရာမို့ သေနပ်သံက ခပ်အုပ်အုပ်သာထွက်ပေါ်လာလေသည်။
စိုးကြီးတို့ ဆရာတပည့်တွေ ကမ်းကုန်အောင် မိုက်ခဲ့ပြီးပြီမို့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက် အလောင်းနှင့် ကောင်လေး အလောင်းကို တစ်နေရာသို့ သွားရောက်ဝှက်ထားလိုက်လေသည်။
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဒီတစ်ခါတော့ ကျားစာမကျွေးတော့ ဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်မို့ .တောတွင်းတစ်နေရမှာ လက်စဖျောက်ပစ်လိုက်လေသည်။ဒီလို အမှန်အကန်လေးများကို လိုးခွင့်ရနေသည်မို့ ဆရာတပည့်သုံးယောက် ဒီတောတန်းလေးကို သဘောကျပြီး မူးတိုင်းရောက်လာနေကြခြင်းဖြစ်ပေသည်.။
” အေး သမီးပြော”
သမီးဖြစ်သူက ပြူးတူးပြဲတဲနှင့် ဝင်ရောက်လာသောကြောင့် စိတ်ပူပြီးမေးလိုက်မိသည်.။
” ဖေကြီးရေ….သေကုန်ပြီ အီးးးးးးးး ဟီးးး”
“အန် ဘာတွေသေကုန်တာတုန်း ဘာတွေဖြစ်လို့တုန်း”
“သမီးသူငယ်ချင်းသုံးယောက်လေ သေသွားပြီ ”
“အသတ်ခံရတာတဲ့ တောထဲမှာ ထင်သွားခုတ်တဲ့လူတွေပြောတယ်။သေနပ်နဲ့ ပစ်ခံရတာတဲ့”
“သူတို့တောထဲကနေ သေနပ်သံတိုးတိုး ကြားတယ်တဲ့”
ရဲကြီး ခေါင်းမွှေးများ ထောင်တက်သွားလေသည်။ဆောက်ပြသနာပဲ ဒါဆိုရင် ဟို..ငါတို့ ကင်လိုက်တဲ့ သုံးကောင်က “တကယ်ကျောင်းသားလေးတွေပေါ့.။”
“မတက်နိုင်ဘူး ကြွေးတင် ပြည်သူဆပ် ပြသနာတက်ရင် ဝန်ကြီးဖာလိမ့်မယ်”
“အေးလေ သမီးရယ် တို့ မြို့ကလည်း ကတုံးရန်က ဝေးသွားလို့ စိတ်အေးလက်အေး ပျော်ရပြီမှတ်နေတာ။”
“ဟုတ်တယ်ဖေကြီးရယ် သူတို့က သမီးဆီကိုလာလည်တာ..လမ်းမှာ သူတို့ပျက်နေတဲ့ ကားလည်းတွေ့တယ်။အရင်တစ်ခါ လူသတ်မှု့ဖြစ်တဲ့ တောထဲမှာပဲတဲ့။”
“အဲ့နေရာကိုပဲ ရွေးလုပ်နေကြတယ်ဖေကြီးရယ်။ဘာလို့ ရဲတွေကို အစောင့်မချခိုင်းထားတာလဲမသိဘူး”
ရယ်ချင်သလိုလို ပင် ဖြစ်သွားလေသည်။
“ရဲတွေလိုးသတ်တာကို သမီးလေးသိရင် ရဲတွေကိုများမုန်းလေမလားမသိပေ…။”
“အေးပါ သမီးရယ် ဒီကေ့စ်ကို အဖေကိုယ်တိုင်ကိုင်ပေးပါ့မယ်။သမီးသူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ အဖေ့သမီးတွေပဲပေါ့….။”
ထိုစဉ်…ရဲကြီး၏ဘေးသို့ အရိပ်တစ်ခု ဖျက်ခနဲရောက်လာလေသည်။
” ဟေ့ကောင် မအေလိုးရဲ မင်းမေမင်းလိုး.။”
“ဟာ ဟိုကောင် ကျောင်းသားကောင် မင်း မင်း ဘာလာလုပ်တာလဲ သေသွားတာလား”
“အန် အဖေဘာဖြစ်တာလဲ ဘယ်သူ့ကိုပြောနေတာလဲ”
“သမီး မမြင်ရဘူးလား ဟို ဟိုဟိုမှာလေ.”
“အာ အဖေကလည်း ဘာမှမရှိပါဘူး။ပေါက်ကရတွေ မြင်နေပြန်ပြီ.။”
” ပြောလိုက်စမ်း.။မင်းတစ်ယောက်ပဲ ငါ့ကိုမြင်ရတာ ဘယ်သူမှမသိစေနဲ”
“.သိရင် မင်းတို့ တစ်မိသားစုလုံးကို သတ်ပစ်လိုက်မယ်။”
” အေးပါသမီးရယ်။ပင်ပန်းလို့ နေမှာပါ။သမီးလည်း သွားနားတော့လေ။”
“မင်းငါ့ကို မှတ်မိတယ်မဟုတ်လား ရဲကြီး။”
“မှတ်မိပါတယ်ကွာ။မှတ်မိပါတယ်။မင်းက ကျောင်းသားပါ.ပြီးတာတွေကို ထားလိုက်ပါတော့ကွာ။”
“ဘာလို့ထားရမှာတုန်းဗျ.။ခင်ဗျားတို့တစ်တွေ လောက်ကိုင်မှာ အတုန်းအရုံးကျဆုံးသွားတုန်းက. နေဝန်းနီပရိုဖိုင်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို ထောက်ခံခဲ့တာ ကျောင်းသားတွေပဲ။”
“ခင်ဗျားတို့ တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းခင်ဗျားတို့ဘက်က ကျွန်တော်တို့ ဝင်နာပေးတယ်။”
“ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ရိုက်တယ်။”
“မ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။အဲ့ဒါက စစ်သားတွေကို မင်းတို့နာပေးတာလေ။ငါတို့က ရဲတွေပါကွာ ခိုင်းလို့ လုပ်ရတာပါ။”
“ခင်ဗျားတို့ကို ပြည်သူတွေက ချစ်ခဲ့သလောက် ခင်ဗျားတို့ ပြည်သူတွေကို ဘာလုပ်ခဲ့သလဲပြောစမ်း။”
“မင်းကို ဘာလို့ သူများတွေ မမြင်ရတာလဲကွာ။”
ခင်ဗျားသိချင်နေပြီမဟုတ်လား။အေး ပြောပြမယ်။ခင်ဗျားတို့ ပြည်မြို့မှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့ ကတုံးဆိုတာ ကျုပ်ပဲ။”
“ခင်ဗျားကို လိုက်ရှာနေတာကြာပြီ။ကံနိမ့်တဲ့ အချိန်စောင့်နေတာ။ဒီနေ့ပဲ ခင်ဗျား သမီးကို သတ်မလို့ ဒါပေမဲ့ မသတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ပြောစမ်းပါ “”ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ ကျုပ်ကို ကျောင်းသူလေးကို သတ်ပါတယ်ဆိုပြီးထောင်ထဲကိုထည့်ခဲ့တာလဲ။”
“လီး ညီလား မင်းတို့ကောင်တွေက လိုရင်တစ်မျိုးမလိုရင်တစ်မျိုး။ ”
“ငါတို့ လက်ပံတန်းမှာတုန်းကလည်း ကိုးတန်းကျောင်းသားလေး မုန့်ကျွေးတာကိုစားပြီးတော့ သူ့ကိုဝိုင်းရိုက်တာ ဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်။”
“အဲ့ဒါက အဲ့က ရဲတွေပါကွာ။တို့ မြို့ကမဟုတ်ပါဘူးကွာ။”
“ထားပါ။ပြောစမ်း ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ ကျောင်းသူလေးတွေကို သတ်ခဲ့တာလဲပြော။”
“ငါက ဒီကောင်မလေးကို လိုးမိတယ်ကွာ။ပြီးတော့ ဒီကောင်မလေးက ငါတို့ကို တိုင်မှာစိုးလို့ သတ်ပစ်လိုက်မိတာပါ။”
“ဒါဆိုလည်း ခင်ဗျားဘာသာ အဖမ်းခံပါလား၊ဘာလို့ ကျုပ်ကို လွှဲချရတာလဲပြောလေ။”
” တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ။ငါတောင်းပန်ပါတယ်။ငါလည်း မတက်သာလို့ပါ။မိသားစုတွေရှိတယ်လေကွာ။ငါသူတို့နဲ့ မခွဲနိုင်ဘူးလေ။”
“အမ်…ဒါဆို ကျောင်းသားတွေကကော လေဥသမားတွေလား “”သစ်ခေါင်းထွက်တွေမို့လို့လား။သူတို့မှာလည်းမိသားစုတွေရှိကြတာပဲလေ။”
“ခင်ဗျားဒီလိုလုပ်တဲ့ အတွက် ခင်ဗျားကို ဒဏ်ပြန်ခတ်ရမယ်။ဘာလို့ ကျုပ်ကိုယ်ပျောက်နေသလဲသိလား။ဘာလို့ သံပရာသီးနဲ့ မှန်ကိုကြောက်သလဲ ဆိုတာကိုကောသိသလား။”
” အေး မသေခင်မှာ နားထောင်သွားလိုက်။”
“ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကို မတရား ထောင်ထဲကို ပို့လိုက်တုန်းက.ကျုပ်ထောင်ထဲမှာ ကျောမဆန့်အောင် အရိုက်ခံရတယ်။ပြန်ထွက်လာတော့ မလေးရှားကိုသွားတယ်။”
” အေး…ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကိုယ်ရှာစားလို့ မရလို့ပေါ့ဗျာ။”
ရဲကြီးထံသို့ လေပေါ်ဝဲ လက်ပြန်တစ်ချက်ကျ ရောက်သွားလေသည်.။
“ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီရတဲ့ တိုးတက်နိုင်ငံတော်ကြီးဆီကို ပြန်မလာတဲ့ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားက ကောင်တွေက ဖင်ယားပြီး အဲ့မှာ ပျော်နေတယ်ထင်လို့လား”
“ခင်ဗျားတို့သာ တကယ် ဒီမိုရကြည့်။တကယ် အလုပ်ပေးနိုင်ကြည့် ဘယ်မအေလိုးမှ သူများနိုင်ငံမှာ မပျော်ဘူး”
“၊ဆောက်ပိုတွေပြောပြီး ဆောက်ပိုတွေလုပ်နေလို့ လုပ်အားတွေအကြံဥာဏ်တွေကို သူများနိုင်ငံအတွက် လုပ်ပေးနေရတာသိပြီလား။”
” အေး အဲ့ဒီကို ရောက်သွားတော့ ကုလား ဆာဒူးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဆာဒူးက သင်ပေးလိုက်တာ။”
“ကိုယ်ဘယ်လို ဖျောက်သလဲဆိုတာကို။မှန် ဘာလို့ ကြောက်သလဲသိလား။”
” အေး..အဲ့ဒါဆာဒူးကြီးက မှာလိုက်တာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ မင်း မှန် ဆိုရင် စကားလုံးက အစ ရှောင်ရမယ်တဲ့။အဲ့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရမှပဲ မင်းမှန်ကို ကြောက်ရတဲ့ ဘဝက လွတ်မယ်တဲ့။”
“ဘာလို့ စော်တွေကို လိုက်ပွတ်နေရတာလဲဆိုတော့ ဆာဒူးဆီမှာ ပညာသင်တုန်းက စော်တွေကို လိုးလို့မရဘူးတဲ့။”
“ဒါကြောင့်မို့လို့ စော်အလန်းလေးတွေကို မလိုးရဘူး။ဒါပေမဲ့ ပညာအရသိတယ်။ဘယ်စော် ဆောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်ပြီးသွားပြီလဲဆိုတာကို။”
“ခင်ဗျားသမီးကို ယောင်လို့တောင် မထိဘူး.ဘာလို့လဲသိလား ခင်ဗျားသမီးကို ခင်ဗျားတပည့် စိုးကြီးလိုးပြီးသွားပြီ။ဆောက်ဖုတ်တောင်လန်နေပြီ။ဘာလို့ သွားပွတ်ရမှာလဲ။”
“ဟိုတစ်ခါလည်း စော်ကိုသွားပွတ်တာ…စော်က ဆယ်တန်းကျောင်းသူ စာကျက်ရင်းနဲ့ သံပုရာရည် သောက်တက်တဲ့စော်။”
“သူအိပ်နေတုန်းတက်ပွတ်လိုက်တာ စော်ကယောင်ပြီး ဆောက်ခွက်ကို ဘေးက သံပုရာသီးဖတ်နဲ့ ပေါက်လိုက်တာ မျက်လုံးထဲဝင်ပြီးစပ်လိုက်တာ။”
“အဲ့ကတည်းက သံပုရာသီးကို ကြောက်သွားတာ။”
“ကတုံးတုံးထားရတာက အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဆောက်ဖုတ်တွေတွေ့ရင် ပွတ်ဖို့လေ။လက်နဲ့လည်းပွတ်တယ် ခေါင်းနဲ့လည်း ပွတ်တယ် ဒါဆိုပိုမကောင်းဘူးလား။”
“ကိုယ်ကတော့ ပျောက်တယ် အကြာကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ဆရာကလည်း မှာတယ်။သူများနိုင်ငံမှာ ဆိုရင် မင်း အလွန်ဆုံးပျောက်နိုင်ရင် တစ်မိနစ်ပဲတဲ့။”
“ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မင်းအကြာကြီး ပျောက်နိုင်တယ်တဲ့။ဘာလို့လဲ မေးကြည့်တော့ မီးမရှိတဲ့ နိုင်ငံလေကွာတဲ့။”
“အကြာကြီးပျောက်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့် ကျုပ်ပြန်လာတာ။မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒီမိုရရင် မှန်ကို ကြောက်ရတဲ့ ဘဝကနေလွတ်သွားမယ်။နောက်ပြီးတော့ ကျုပ်လည်း စော်တွေကို အကြာကြီးပွတ်ချင်သေးတယ်။”
“ဒါကြောင့် ဒီမြို့ကိုလာသောင်းကျန်းတာ။ခင်ဗျားတို့ကိုလည်း ရှာရင်းပေါ့။”
“ခုတော့တွေ့ပြီ ခင်ဗျားတို့ အရင်ကောင်မလေးကို သတ်ပြီးထားခဲ့တဲ့ နေရာနားမှာပဲ ခင်ဗျားသမီးသူငယ်ချင်းတွေကို သတ်ပြီးထားခဲ့တာ ကျုပ်သိတယ်။”
“ဒီမြို့မှာ ကျုပ်မသိတာ ဘာမှမရှိဘူး။နားလည်လား.။ခင်ဗျားသိထားဖို့လိုတယ်။အခု ခင်ဗျားတို့ ဆရာတပည့် သုံးယောက်ကို ကြိုးစင်တင်ပစ်မယ်။”
လျပ်တစ်ပြက် ရဲကြီးက ခါးကြားမှ ဗြောက်ကို ထုတ်ပြီးပစ်လိုက်လေသည်။
“ကတုံးလေ ငါတွေ့လိုက်တယ် သေသွားပြီလား မသိဘူး။”
“ငါပစ်ထည့်လိုက်တာ အဟေးးးးးးးး ငါကွ ကတုံးသေပြီကွ။”
ထိုသို့ဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ…စိုးကြီး တစ်ယောက်ကောက်ကာ ငင်ကာ ဖျားလေတော့သည်။ထိုသတင်းကို ဂျိုးကြီးကြားသဖြင့် လူနာသွားမေးလေသည်။
ကားကို ရပ်ပြီး စိုးကြီး အိမ်ထဲသို့ ဝင်လာသည်က ဂျိုးကြီး။
” ဟေ့ကောင် စိုးကြီး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ.နေမကောင်းဘူးဆို။”
“ဟုတ်တယ် ဂျိုး ငါတိုင်တွေပတ်နေပြီ။”
“ဘယ်က ကတုံးလဲကွာ။မင်းဟာကလည်း မရေမရာနဲ့။”
“ဟာကွာ။ ငါပြောတာ ငါတို့မြို့က စော်တွေကို လိုက်ပွတ်နေတဲ့ ကတုံးလေကွာ။အဲ့ကောင်က ဘယ်သူလဲ မင်းသိလား။”
ငါတို့ မတရား ဂွင်ဆင်ပြီး ဖမ်းလိုက်တဲ့ ကျော်ကိုကိုဆိုတဲ့ ကျောင်းသားလေးကွာ။”
“ဒီကောင်က မလေးရှားကိုသွားပြီးတော့ အဲ့ကနေ ဆာဒူးတစ်ယောက်ဆီကနေ ပညာတွေ သင်လာပြီးတော့ ဒီမှာ ငါတို့ကို လာရှာတာ။”
“ဟာာ မင်းဟာကလည်း နေမကောင်းဖြစ်ပြီးဆောက်တစ်လွဲတွေပြောနေတာလားကွာ.။”
“ငါပေါက်ကရ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ဂျိုး။ဒီကောင်မှ ဒီကောင်အစစ်ပဲကွာ။ငါသိတယ်။”
“ဒါဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲဟေ့ကောင်.. မင်းကို ဒီကောင် ဘာလုပ်သွားသေးလဲ။”
“ငါ့ ကို ငါ့ကိုကွာ…ဂျိုးကြီးရာ..ဒီကောင်ငါ့ကို ဖင်လိုးသွားတယ်ကွာ။ဂေါ်လီတွေလည်း ပါတယ်ကွာ။”
“ငါ့ကိုလည်းပြောသွားသေးတယ်။အလှည့်ကျလို့ နွဲ့လည်း ငနွဲ့ပဲ ဖြစ်မှာနော်တဲ့.။ပြီးတော့ မလေးရှားက ဂေါ်လီဆိုပြီးငါ့ကို ထည့်သွားတာကွာ။”
“ကိုတာရာယာကနေဝယ်လာတာတဲ့…ကြီးလိုက်တဲ့ ဂေါ်ကြီးကွာ ငါ့ကို သုံးခါတောင် ကင်သွားတာ” “ဖင်ပါကြိမ်းသွားတယ်သားကြီးရာ.။ငါတော့ မျိုးကန်းပါပြီ။”
ပြောရင်းဖြင့်ပင် ရဲသားကြီး မျက်ရည် ဘူးသီးလုံးခန့် ကျလာလေသည်။ငိုလည်း ငိုချင်စရာပါပေ၊ရဲကို ဖင်လိုးသွားသည် ဆိုခြင်းကလည်း ရှက်စရာမဟုတ်ချေလော။
“ဒါဆိုရင် ငါပြေးမှ ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ကွာ။ဒီကောင်ငါ့ကိုလည်း ဖင်လာလိုးလိမ့်မယ်။ငါလစ်တော့မယ်ကွာ။”
” ဟေ့ကောင် မရဘူး သားကြီး။ဒီကောင်ကနေရာတိုင်းမှာကို ရှိနေတာ။ဒီကောင့်ကို မင်းမမြင်ရဘူးလေ။”
“ဒီကောင်က ငါတို့ကို မြင်နေရတယ်ကွာ။ငါလည်း ပြေးစရာမြေမရှိလို့ ဒီမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်း ဒီကောင် ဖျက်ခနဲပေါ်လာလိုက် လိုးသွားလိုက် လုပ်နေတာကို အံကြိတ်ခံနေရတာပါ သားကြီးရာ။”
“အညွန့်တင်မဟုတ်ဘူး အမြစ်ပါ ကျိုးတာပါကွာ။”
“မင်းလည်း ပြန်ပြီးတော့ ဖင်ကို ဆီထည့်တာတွေ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ ကျင့်တာတွေကို လုပ်ထားတော့ကွာ။ဒီကောင် မလေးရှားကနေထည့်လာတယ်ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ဂေါ်လီတင်မဟုတ်ဘူး။”
“နဂါးပတ်ကြီးလည်းပါတယ်ကွာ။လီးမှာပတ်ပြီးတော့ သမ ရတဲ့ဟာကြီး။ဒီကောင် ဒီဟာတွေကို
အဲ့ဒါကြီးနဲ့ ဝိုက်ခံလိုက်ရလို့ကတော့ ငါ့မောင် မင်း ချီးပါ ထွက်သွားမယ် ချီးပါထွက်သွားမှာကွ။”
“”ငါ့ကိုထားခဲ့ပါတော့ကွာ။မင်း အိမ်ပြန်ပြီးတော့ ပြင်စရာရှိတာတွေကို ပြင်ပါတော့။”
“တစ်ခါခုန်ရင် နှစ်ထပ်တိုက်ကို ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်က ကျည်ဆံကို အသာလေးရှောင်နိုင်တယ်လေကွာ။”
“ငါအခံရခက်ဆုံးက ဒီကောင် အညှိုးတစ်ကြီးနဲ့ လိုးတာပဲကွာ။ငါကြောက်တယ်ကွာ။ငါ့ကိုထားခဲ့တော့ကွာ။”
ရဲကြီးက အော်ရင်းငို ငိုရင်းအော်လုပ်နေသဖြင့် ဂျိုးကြီးလည်း ကြောက်ရွံ့လာကာ စီးတော်ကားလေးဆီသို့ အသည်းအသန် ပြန်ပြေးလာခဲ့မိလေသည်။
လမ်းတစ်လျှောက် ဂျိုးကြီး စဉ်းစားနေသည်မှာ..ဒီကတုံးကို ဘယ်လို ရှင်းရင် ကောင်းမလဲ။ဒီကောင် ကိုယ်ပျောက်တယ်ဆိုတော့ HOLLOW MAN ကားထဲကလို ရေတွေ သွေးအ်ိတ်တွေနဲ့ ဖြန်းပြီးတော့ ဖမ်းရင်ကောင်းမလား ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဒီကောင်ကို စစ်တပ်ကို ခေါ်ပြီး
ပစ်သတ်ခိုင်းရင်ကောင်းမလား။လက်ပတ်နီကောင်တွေကို လက်ပတ်နီ မဝတ်ခိုင်းပဲနဲ့ လည်ပတ်နီတွေနဲ့ဆို ဒီကောင်တွေ အရိုက်မသန်ပဲ အကိုက်သန်ကြမလား။ ထိုလောသည်လော တွေးရင်းကားလေးကို ညာဘက်လမ်းကြားထဲသို့ ကွေ့ ဝင်လိုက်လေသည်။
ဖင်ထိုင်ခုံ အောက်မှ လက်ကြီးတစ်ဖက်ထွက်လာကာ ဂျိုးကြီးဖင်ကို လာညှစ်လေတော့သည်။
ကြောက်လန့်တစ်ကြားဖြင့် ဂျိုးကြီး အော်ဟစ်လိုက်လေတော့သည်……….။
“အဲ့ အဲ့ဒါပါပဲ ခင်ရယ် အစ်ကိုမှားသွားပါတယ်။ကောင်မလေးကိုလည်းမုဒိမ်းဝိုင်းကျင့်ပြီးမှ သတ်လိုက်မိပါတယ်။တောင်းပန်ပါတယ်။”
“သမီးသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း သတ်လိုက်တာ အဖေပါပဲသမီးရယ်တောင်းပန်ပါတယ်။”
“ဒါဆို အစ်ကို ကျွန်မနဲ့ စိုးကြီးနဲ့ လိုးတာကိုလည်း အစ်ကိုသိပြီးပြီပေါ့နော်.တောင်းပန်ပါတယ် အစ်ကိုရယ်”
” ညီမလည်း မတက်သာလို့ ဖြစ်သွားရတာပါ။”
“ရပါတယ်ခင်ရယ် နားလည်ပေးရမှာပေါ့။ဒါဆိုရင် စိုးကြီးနဲ့ ဂျိုးကြီး နှစ်ယောက်လုံးပျောက်နေတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ရှင်…” “ရှင်သူတို့နှစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်ပြီလား။”
ရဲကြီးကတော်က ကြောက်လန့်တစ်ကြား အမေးကို ကတုံးကဖြေသည်.။
“မသတ်ပါဘူး ကတော်ကြီး ဒီကောင်တွေကို ကိုယ်ချင်းစာတက်သွားအောင် ဖင်အစိမ်းလိုးပေးထားတယ်။နှစ်ကောင်လုံး အခြောက်ဖြစ်နေကြပြီလေ။”
“ကျုပ်ပြန်အလာကို နှစ်ယောက်သား ရန်ဖြစ်ပြီးစောင့်နေကြတော့တာ။ဒီကောင်တွေကို အခု လည်ပတ်အနီတွေပတ်ပေးထားတယ်။”
“အခု နောက်ဆုံးကျန်တာက ရဲကြီး ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို သေနပ်နဲ့ ပစ်ရဲတဲ့ သတ္တိကတော့ မဆိုးပါဘူး။”
“ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားကျည်လောက်တော့ မတိုးဘူး။ရဲကြီး ခင်ဗျားသမီးကို ခေါ်လိုက်”
” ခေါ်လိုက်စမ်းပါ။မခေါ်ရင် ခင်ဗျားသမီး တင်မဟုတ်ဘူး တစ်မိသားစုလုံးသေသွားမယ်နော်။”
“ခင်ဗျားတို့ အလှည့်ကျရင် မနွဲ့ဖို့ အတန်တန်မှာထားပြီးသားနော်။ခေါ်လိုက်…ပြန်လုပ်ဖို့တော့ မစဉ်းစားနဲ့တော့ ကျည်မတိုးဘူး” “ကျုပ်လက်တစ်ချက် ရမ်းလိုက်တာနဲ့ ခင်ဗျား မီးဟုန်းဟုန်းတောက်သွားမယ်နော်။”
” အေးး အေးပါကွာ။ငါတို့ သမီးလေးတော့ ချမ်းသာပေးပါကွာ။”
“ခင်ဗျားက သူများသားသမီးတွေကို ကျတော့ လိုးတက်တယ်။ခင်ဗျားအလှည့်တော့ တုန်နေပါလား။”
” ခေါ်လိုက် ခင်ဗျားသမီး ဟိုတံခါးအနောက်မှာရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ မမြင်ရပေမဲ့ ကျုပ်မြင်နေရတယ်။”
“အင်း ဟုတ်တယ် ငါဒီမှာ။နင့်ကို ငါမကြောက်ဘူးကတုံး.။နင့်ကို ငါ့အဖေဘယ်လိုပဲ လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ နင်သူ့ကိုပဲ ရှင်းသင့်တယ် ငါ့အမေနဲ့ ငါ့ကို လာမထိနဲ့”
ကောင်မလေးက ကျားရဲလေးသဖွယ် ကတုံးကို ပြန်လည်ပြောဆိုလေသည်.။
“အဲ့လောက် မရိုးစင်းဘူး ကောင်မလေး.။an eye for an eye.”
ကတုံးက အားရပါးရ ဟားတိုက်ရယ်လိုက်လေသည်။
“ဒီလောက် မရိုးစင်းဘူးဆိုတာကို နားမလည်သေးတာနေမယ်။ရဲကြီး မင်းလီးထုတ်စမ်း..”
“ထ …. မင်းသမီးကို မင်းလိုးရမယ်။မင်းကိုဒဏ်ပေးရမယ်။”
“နင် ဒီလိုမလုပ်ရဘူး. မအေးလိုး..”
ဟုဆိုကာ ကတော်ကြီးက ကတုံးကို ဝင်ရိုက်သည်။
ကတုံးက လက်ကို ဝှေ့ရမ်းလိုက်လေသည်။
“ထပ်ပြီးတော့ ဖင်ယားရင် အကုန်လုံးကို သတ်ပစ်လိုက်မယ် နားလည်လား။နင်တို့ ထက်စွမ်းတယ်။”
“ဟိုကောင်မ နင်ဒီကို လာစမ်း ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်စမ်း။”
“မလုပ်ပါနဲ့ ရှင်..ရှင်ကြိုက်သလို လုပ်ပါ။”
“ဒီလို ကြီးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ် .ငရဲကြီးလိမ့်မယ်။”
“ဘာ ငရဲကြီးမယ် ဟုတ်လား။နင်တို့ ရဲတွေ ဘုန်းကြီးတွေကို ရိုက်တုန်းကတော့ ငရဲမကြီးဘူးလား။ပြောလေ နင်တို့ မရိုက်ခဲ့ဘူးလား။”
ကောင်မလေးက တုန်ရီစွာဖြင့် ကတုံးအနားသို့ ရောက်လာလေသည်။စိုးကြီး တစ်ခါသာ လိုးဖူးသဖြင့် ဖင်သားလေးများမှာ စိုတက်နေလေတော့သည်။
ကတုံးက ဖင်သားကြီးများကို တစ်ချက် ကိုင်ကြည့်လိုက်ရင်း …”အင်း ဒီလောက်ဆိုရင် ခင်ဗျားလိုးကောင်းမှာပါ။”
“ခင်ဗျား ကျောင်းသူလေးတွေကို လိုးခဲ့တုန်းက ဘယ်လိုလဲ သူတုိ့အပျိုမှေးပေါက်သွားတာကို ဇိမ်ခံပြီးတော့ ကြည့်ဖူးတယ်မဟုတ်လား။”
” ဆောရီးဗျာ။ဒီကောင်မကတော့ ပါကင်မဟုတ်လို့ ကျုပ်တောင် မထိဘူး။”
“ခင်ဗျားတပည့် စိုးကြီးလိုးသွားတာလေ။ခင်ဗျား လီးထုတ်စမ်း။”
“ဟိုကောင်မလေး ဒီမှာ ဖင်လာကုန်းစမ်း”
ကောင်မလေးက မျက်ရည်ပေါက်များကျရင်း ဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်ရင်းဖင်ကုန်းပေးလေသည်။ဖင်သားလေးမှာ ဖြူဖွေးနေသဖြင့် ရဲကြီး ကြည့်နေရင်းပင် မျက်နှာလွှဲမိလေသည်။
“နင့် ဖင်ကို ဖြဲပြစမ်း။သေချာဖြဲနော် ဖင်ပေါက်လေးကို ငါမြင်ချင်တယ်.။”
“နင့်ဖင်လေးက နီရဲနေမှာပဲ.။နင့်ကို စိုးကြီးဖင်လိုးသွားသေးလား.။တော်တော် များလားပြောစမ်း။”
“ရှက်မနေနဲ့ အခု အဲ့ကောင်လည်း ငါ့လီးကို မျှော်နေရတဲ့ ကောင်ဖြစ်နေပြီ၊”
ကောင်မလေးက ဖင်ကိုကိုင်ရင်းဖြဲပြလိုက်လေသည်။ဖင်လေးများကိုကုန်းထားရင်းက လက်နောက်ပြန်လေးဖြင့် ဖင်သားလေးများကို ဖြဲပြနေသည်မှာ အလွန်ရင်ခုန်ဖို့ ကောင်းနေလေသည်။ရဲကြီးမှာ မျက်နှာလွှဲထားလေသည်။သူ့သမီးလေး အရှက်ကို သူမကြည့်ရက်တော့ပေ.။
“ရှင် နင်နင် ဘာတွေပြောနေတာလဲ ငါ့ကိုနင် ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ။”
” တော်စမ်းပါ ကတော်ကြီးရာ ခင်ဗျား ဒီရဲကြီးနဲ့ မယူခင်မှာ ဒုတပ်ကြပ် တစ်ယောက်နဲ့ ကုန်းပြီး ဒီကောင်မလေးကို ရထားတာ” “မသိဘူးများမှတ်နေလား။ရာဇဝင်ကို လှန်ပြလိုက်ရမလားပြောလေ။”
“မ မလုပ်ပါနဲ့တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကောင်မလေးက သူ့သမီး အရင်းမဟုတ်ပါဘူး။နင်ဒါတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး….”
“ဟားဟားဟ….မလေးရှားမှာ နာဇီလာမာ့စားပြီးတော့ အတွင်းအားတွေကျင့်ခဲ့ရတာ။ချောင်ကစ်ကိုသွားပြီးတော့ မလေးမတွေ အင်ဒိုမတွေဆီက ပါဝါတွေ သွားယူခဲ့ရတာ။”
“thai song တစ်နေ့ တစ်ပြားသောက်ပြီး ငါ့ ကိုယ်ခံအားတွေကို မြှင့်ထားခဲ့ရတာ.ကြွက်တွေမြင်တိုင်းငါကြွက်တက် မတက်
“ဒါတွေကို နင်သိလား….ငါဒီလို လေ့ကျင့်ခဲ့လို့ ငါဒီလို အတွင်းအားတွေရတာ။မလေးရှားမှာ ပင်ဂျမ်းမရလို့ …ကြက်ဥကြော်သိုင်း မက်ဂီကျင့်စဉ်တွေကို ငါလေ့လာခဲ့ရတယ်။
“မန်ကျည်းသီးတွေတွေ့တိုင်း ငါ့ခြေသိုင်းကို သုံးရတာတွေကို နင့်ကိုပြောပြလိုက်ရင် နင်အံ့သြတော့မှာ
“ဒါတွေဟာ ပါရမီတွေပဲ။.ကြာပါတယ်။နင့်အကြောင်းတွေကို အားလုံးလည်း သိသွားပြီဆိုတော့ စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။မတက်နိုင်ဘူးလေ အလှည့်ကျရင်မနွဲ့ကြေးပေါ့.”
သမီးအရင်းမဟုတ်ဟု အသံကြားရင်း သူတို့နှစ်ဦး အချီအချတွေးနေမိကြသည်က. ရဲကြီးနှင့် ရဲကြီးသမီး။
“အင်း… အဖေက ငါ့အဖေ အရင်းမဟုတ်ဘူးတဲ…အို ငါဘာတွေတွေးနေတာပါလိမ့်…အဖေ့ လီးကြီးကလည်း ကြီးလိုက်တာ။”
“ဒီကောင်မလေးကငါ့သမီးမဟုတ်ဘူးတဲ့.။ဖင်လေးကလည်း တင်းနေလိုက်တာ.။ဒီလိုသာတင်းနေလို့ ကတော့ပြသနာပါပဲ။”
“အာာ..ဖင်ပေါက်လေးကလည်း စိုနေလိုက်တာ။ခါးလေးကလည်း သေးပြီးတော့ နို့တွေကို ဘာလို့ ချွတ်ထားရပါလိမ့်။”
“ကဲ ပြောရင်းနဲ့ အချိန်တွေကုန်တယ် နေထွက်လာတော့မယ်။နေထွက်ရင် ငါလစ်ရတော့မှာ။ဒီတော့ အကြွေးကို အခုပဲ ယူထားလိုက်တာကောင်းတယ်။”
နှစ်ယောက်စလုံးယောင်နန ဖြင့် ပါးစပ်ဟလိုက်ကြလေသည်.။ကတုံးက ဆေးနှစ်လုံးကို ပါးစပ်များအတွင်းသို့ ထည့်လိုက်လေသည်။
“ဘာတွေလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ ဖီးလ်ဆေးလို့ ခေါ်မလားပဲ။နင်တို့နှစ်ယောက်လုံးက အမျိုးလည်းမတော်ကြဘူးလေ။နောက်ပြီးတော့ နည်းနည်းလေး ဆေးတင်ပေးလိုက်တဲ့ သဘောပါ။”
ကတုံးက အသည်းအသန် ရယ်မောလိုက်လေတော့သည်။ဇီးကွက်များပင် ကြောက်လန့်ပြီး လန့်ဖြန့်ပျံသန်းသွားကြလေသည်…။အငြှိုးများဖြင့် ဘဝများကို ဖျက်ဆီးလေတော့ မည်လော.။
“ဒီဆေးက အလကားရထားခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။ငါမလေးရှား စက်ရုံမှာ ငါတို့ သမ္မတကြီးကောင်းမှူ့နဲ့ အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့ရတယ်။”
“အဲ့စက်ရုံမှာ ငါနဲ့ အတူလုပ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားကောင်ပေးလိုက်တဲ့ဆေးပဲ။.”ဒီဆေးနဲ့ ငါစော်တွေကို အရင်က နှူးစားမလို့ လုပ်တာ..အခု
ပွတ်ရုံပဲ ပွတ်လို့ရတယ်။စော်တွေကို စောက်ဖုတ်မှုတ်ပြီးတော့ ဂွင်းထုရတယ်။ငါ့ဘဝမှာ သူများတွေလုပ်တာကိုပဲ ကြည့်နေရတယ်။”
“အခုတော့ maharnan.com ကိုသွားကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။”
“မင်းတို့ကိုပဲ live show လုပ်ပြီးကြည့်ရတော့မှာပဲ.။တစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင် ထိန်းမရတော့ပါဘူးလေ။”
“ကတော်ကြီးကြည့်ထားတော့ နင့်ယောက်ျားနဲ့ နင့်သမီးလိုးတော့မှာ.။.အဟားဟားးးးး”
ဆေးသောက်ပြီး တစ်မိနစ်စွန်းစွန်းတွင်…အရင်ဆုံးထပြေးသည်က ကောင်မလေးပင်…………
ကောင်မလေးပုံကျသွားလေသည်.မျက်လုံးများကလည်း ကြောက်လန့်တစ်ကြားဖြစ်နေလေပြီ။ထိုသို့ဖြစ်လာမည်ကို ကတုံးလည်း သိနေနှင့်ပေပြီ..။
ကောင်မလေးဆီကို ရိပ်ခနဲပြေးလာသော အရိပ်တစ်ခု…..ရဲကြီးပင်ဖြစ်လေသည်။
ရဲကြီးမျက်လုံးများမှာ လူစိတ်ပျောက်နေလေပြီ။ကောင်မလေး နို့ကို အတင်းပင် ဝင်စို့နေလေသည်။.ကောင်မလေးမှာ အသိစိတ်အနည်းငယ်သာမဲ့နေသေးသောကြောင့် အတင်းပြန်လည် ရုန်းကန်လေသည်။
“အား…အဖေ မလုပ်ပါနဲ့ သမီးလေ မလုပ်ပါနဲ့နော်။”
ပြန်ရိုက်ဖို့ရာလည်း အခက်တွေ့နေလေသဖြင့် ကောင်မလေးမှာ ထပြေးဖို့သာလုပ်နေရလေသည်။ကတုံးမှာကား မျက်လုံးနီကြီးဖြင့် ကောင်မလေးဖင်ကို ကြည့်နေလေသည်.။
ရဲကြီးမှာ ကောင်မလေးနို့သားများကို မြင်လိုက်ရပြီးလျင် ကောင်မလေး ဆောက်ဖုတ်ကို နမ်းဖို့ရာလိုက်ရှာလေတော့သည်……..ကောင်မလေးက ရုန်းနေလေသည်။ရဲကြီးက ကောင်မလေး ဘောင်းဘီတစ်ခုလုံးကို ချွတ်ချလိုက်လေသည်.။ကောင်မလေးမှာ မရုန်းကန်နိုင်တော့သဖြင့်
“အဟင့်….အဖေရေးးးး သမီးကို မလုပ်ပါနဲ့ ကြောက်ပါတယ်။”
ရဲကြီးက ကောင်မလေးဖင်သားများကို မိသွားလေတော့သည်။နောက်တွင် ကောင်မလေး ဆောက်ဖုတ်ကို ဖြဲရင်းကြည့်လိုက်လေသည်။မြင်လိုက်ရသည်ကကောင်မလေး ဆောက်ဖုတ်ရဲရဲ..
ရဲကြီးက ကောင်မလေး ဆောက်ဖုတ်ကို နှိုက်ချလိုက်လေသည်၊ကောင်မလေးက အော်လိုက်လေသည်။
“အားးးးးးးး သေပါပြီ နာတယ် သေပါပြီ မသာကြီး သေပါပြီ.။အားးးးးးးးးး”
ကောင်မလေးက အော်လေ ရဲကြီးမှာ စိတ်တက်ကြွလေ ဖြစ်ရင်း ကောင်မလေး ပေါင်ကို အတင်းဆွဲဖြဲလိုက်လေရာ..တွေ့လိုက်ရသည်က ကောင်မလေး ဆောက်ရေဖြူများးးးးးးးး
အားပါးပါး ရဲကြီးအလွန်ပင် သဘောကျသွားလေသည်။ကောင်မလေး ပေါင်ကြားထဲသို့ လီးကြီးကို အတင်းထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။
” ဗြစ်…ထုတ် ကျစ်ကျစ်။”
ကောင်မလေး အော်ဖို့ အချိန်ပင် မရတော့ချေ.ကောင်မလေး ဖင်ကို အတင်းပင် ညှစ်ရင်းလိုးနေမိသည်က ရဲကြီး။
” ကောင်းလိုက်တာ အားးးးးးး ကောင်းလိုက်တာ။ငါ့ကိုဖက်ထားပါ အား”
” ကောင်းတယ် ဖက်ထားပါ။ဖင်ကို မြှောက်ထားပေးပါ”
ကောင်မလေးက ယောင်နနဖြင့် ပေါင်ကို တင်းပေးလိုက်လေသည်။ကောင်မလေးကို ပေါင်ထောင်ခိုင်းထားရင်း ခါးလေးကို ကိုင်ရင်း တစ်ချက်ချင်း အားမာန်အပြည့်ဖြင့် ရဲကြီးဆောင့်ထည့်ရင်းချွေးများစွာထွက်နေလေတော့သည်.ထိုမြင်ကွင်းကို အသေအချာ စူးစိုက်ကြည့်နေသည်က
ကောင်မလေးက ပြီးချင်လာသဖြင့် ရဲကြီး ဖင်သားများကို ညှစ်ရင်းကော့ထိုးလာလေသည်။ကောင်မလေး ဆောက်ဖုတ်လေးများ၏ ညှစ်အားမှာလည်း အလွန်ပင်သန်မာနေပေရာ..ရဲကြီးမှာ လရေများကို ကြာရှည်ထိန်းထားဖို့ မလွယ်ကူပါပေ။ရဲကြီးက ကောင်မလေး ခါးကိုတစ်ချက်ကိုင်လိုက်ရင်း
ခါးကို ဆောင့်ချလိုက်ရင်း ဆီးစပ်များကပ်သွားအောင် လရေများကို ညှစ်ထုတ်ချလိုက်လေတော့သည်။
“လရေတွေ ထွက်ကုန်ပြီ ဝင်ကုန်ပြီ ကောင်းလိုက်တာ။ကောင်းတယ် ”
“မထုတ်နဲ့ဦး ဒီထဲမှာပဲ ခဏစိမ်ထားပါ။ကောင်းတယ်”
“အား နွေးလိုက်တာ လရေတွေဝင်ကုန်ပြီ ဘောင်းဘီလေးကို မ ထားဦး ”
“လရေတွေ ဝင်ကုန်ပြီး အား”
” ကောင်းလိုက်တာ ပေါင်လေးကို တင်းနေတော့ လိုးရတာကောင်းလိုက်တာ။”
ကောင်မလေးနှင့် ရဲကြီးလိုးနေသည်ကို မျက်လုံးဝိုင်းများဖြင့် အားကောင်းမောင်းသန် ကြည့်နေသည်မှာ ကတော်ကြီးပင် ဖြစ်နေပေသည်။ကတုံးသိလိုက်ပေပြီ ကတော်ကြီးလည်း ဆောက်ရေတွေ ရွှဲနေလောက်ပြီဆိုတာကိုလေ…
“အားလုံးလက်ကို မြှောက်ထားလိုက် မင်းတို့ကို ငါတို့ဖမ်းပြီ။”
ကတုံးက ပမာမခန့်ဖြင့် နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရာ မြင်လိုက်ရသည်က….သူ့ဆရာကုလားကြီးနှင့်ရဲများ။
“ဟာ….အဘန်း(အစ်ကိုကြီး) ကနပါး မာရီးဆီနီး(ဘာလို့ ဒီကိုလာတာလဲ)”
“ဒီယာဘန်ဂေးကား…မာကျန်းမာနား။.(ဒီကောင်တွေခေါ်တာလား ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကုန်တာတုန်း)”
“ဒီယာစူဒါ့သောက် ဆာယာဘွန်း ဆိုးမား စူဒါ့ကာစီးဘာလစ်(သူတို့လည်းသိသွားပြီ ငါလည်း ဒီကောင်တွေကို အကုန်ပြန်လုပ်ပြီးသွားပြီ)”
“တာဘိုလေးအဒစ် ယူဆူစာ့လား(မရဘူးကောင်လေး မင်းငါ့ကို စိတ်ပျက်စေတယ်)”
“ကနပါးအဘန်း ယူ့ကျကပ်အပါး(ဘာဖြစ်လို့လဲ့ အစ်ကိုကြီး မင်းဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ ဘာတွေပြောနေတာလဲ)”
“မင်းကိုယ်ဖျောက်လို့မရတော့ဘူးကောင်လေး..မင်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ရက်စက်ရတာလဲကွာ။”
“အခုမင်းလုပ်လို့ ရဲတွေလည်း အခြောက်ဖြစ်တဲ့ ကောင်တွေဖြစ်လိုဖြစ် ကိုယ့်သမီးကိုယ်လိုးတဲ့ ကောင် ဖြစ်လိုဖြစ်ကွာ။”
“ငါတို့ရဲတွေ စစ်သားတွေမှာလည်း မကောင်းတဲ့ သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ဝန်ခံပါတယ်။”
“ဒါနေရာတိုင်း ဌာနတိုင်းမှာရှိပါတယ်ကွာ။မင်းက ရဲတစ်ယောက်နဲ့ညိတိုင်းရဲတွေကို သတ်နေမယ်ဆိုရင်….လူဆိုးတွေကို ဘယ်သူဖမ်းမှာလဲ..”
“မင်းမမှားပေမဲ့ မှန်တယ်လို့လည်းမဆိုချင်ပါဘူး။မင်းဒီလို သောင်းကျန်းနေတာကိုငါတို့သိသလို ရဲမှူးကြီး ခြေလှမ်းတွေ ပျက်နေတာကိုလည်း ငါတို့ ရိပ်မိလို့ လူလွှတ်ပြီး စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာကြာပါပြီကွာ။”
“အခု ဒီ ကုလားကြီးကိုလည်း ငါတို့ သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် မလေးရှားကနေသွားခေါ်လာတာ။”
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က သမ္မတကြီးက ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့ မလေးရှားကိုသွားတာပါ…”
“ပိုက်ဆံသွားချေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ချေးထားတဲ့ဟာတွေကို မင်းတို့ ကျေအောင်ဆပ်ပြီးမှ ငါတို့
“ငါးသိန်းဆိုတာ မနည်းမှန်းသိပေမဲ့လည်း ငါတို့သုံးတာ လက်လွန်သွားလို့ပါ.။”
“မင်းတို့ မသုံးခဲ့ရပေမဲ့ ချေးကြွေးလေးတော့ ဆပ်ပေးကြပါကွာ။FACEBOOK မှာ ဖွချင်တဲ့သူတွေကတော့ သမ္မတကြီးက မလေးရှားကိုသွားတာ ကျောင်းသားတွေကို လက်ပံတန်းနဲ့ ရန်ကုန်မှာ ရိုက်တဲ့ ကိစ္စကို
မသိချင်ယောင်ဆောင်မလို့ သွားတာလို့ပြောကြပေမဲ့ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။”
“သမ္မတကြီးက ငါတို့ မြို့ကနေတစ်ဆင့် မင်း တစ်နိုင်ငံလုံးက အပျိုလေးတွေကို ပွတ်မှာ မှုတ်မှာစိုးလို့ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာပြီး မလေးရှားက ဒီကုလားကြီးကို သွားရှာတာပါ။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် တောင်းတောင်းပန်ပန်
“သူလိုက်မလာဘူးဆိုရင် မင်းပညာနဲ့ ငါတို့ရဲတွေ တာဝန်လက်ပတ်တွေကော လည်ပတ်တွေကော ပတ်ချိန်တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။”
“ဒီတော့ကွာ မင်း….တို့ ရဲတွေအားလုံးကို လက်စားချေမဲ့ အစီအစဉ်ကို ဖျက်လိုက်ပါ။မင်းဆရာနဲ့ မင်း မလေးရှားကို
ကုလားကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ ကုလားကြီးက ကတုံးကို သနားကရုဏာ သက်သောမျက်လုံးများဖြင့် တန်ပြန် ကြည့်နေလေတော့သည်။
“ဘာလစ်လား အဒစ် မလေးရှား ဘိုလေးမာ(ပြန်လာခဲ့ပါ ကောင်လေး မလေးရှားမှာ အားလုံးရပါတယ်။)”
“ဆီနီ မားသီး ဘညာ့ မလေးရှား သာဒါ့ မာကျန်းနီး(မလေးရှားမှာ သေတဲ့ လူတွေက ဒီမှာသေတဲ့ သူတွေထက် အများကြီးနည်းပါတယ်။)”
ဟုတ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်ဖြစ်လို့ အသတ်ခံရလို့ အက်စီးဒန့် ဖြစ်လို့ သေတဲ့ သူတွေက မလေးရှားထက် အဆ နှစ်ဆယ်ကျော်ကို များပါတယ်။ဖျားလို့သေတဲ့ မသာ မလေးရှားမှာမ ရှိသလောက်ပါပဲ။မြန်မာငွေ သုံးရာပေးရင် ဆေးရုံတက်လို့ရပါတယ်..(စကားချပ်)
“ယား အဘန်း…ဆာ(ဟုတ်ပြီ အစ်ကိုကြီးငါပြန်လိုက်မယ်။)”
ထိုသို့ဖြင့် ရဲကြီးတို့ မိသားစုကို တိုင်းမှူးကိုယ်တိုင် ရဲစခန်းသို့ခေါ်သွားပြီးအမှူ့ဖွင့်လေသည်။စိုးကြီး ဂျိုးကြီး နှစ်ဦးစလုံးကိုလည်း ထိုက်တန်သော အပြစ်များကို ချမှတ်လိုက်လေသည်….။
ရဲများအားလုံးကို ဒဏ်ခတ်ရန်ကြံသော ကတုံးအကြံကိုလည်း စွန့်လိုက်ရလေတော့သည်။ကုလားကြီးနှင့် ကတုံးလေဆိပ်တွင် ရောက်နေနှင့်ပေပြီ။….
လေဆိပ်မှတစ်ဆင့် လေယျာဉ် စီး သွားကြလေသည်.။တည်ရာအရပ်ကား မလေးရှားတွင် မဆုံးနိုင်သေးသော ပညာရပ်များဖြစ်သည့်….
နာဆီလာမာ့ကျင့်စဉ်များ မက်ဂီးမီ အတွေးအခေါ်များနာဆီ ဂိုးရင်း..ပညာရပ်များနှင့်အတူ…..တဲတာရစ်…အကွက်များတည်ရှိရာမလေးရှားရှိ..ဘာတူးကေ့ဗ်ခေါ် ….တောင်တန်းတစ်နေရာသို့ပင်ဖြစ်လေသည်.။
လေယျာဉ်ပေါ်သို့ အရောက် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် စကားမဆိုကြသေးပဲ…..ကတုံးက ဘေးဘယ်ညာသို့ အမှတ်တစ်မဲ့ ကြည့်လိုက်လေရာ…မြင်လိုက်ရသည်ကား…လေယျာဉ်တောင်ပံတွင်ရေးထားသည်က
“ဒါ ဒါဆို ဒီလေယာဉ်ကြီးက……”
“ဘလွမ်းလာဂီး အဒစ်…လာဂီးမာရီး(မပြီးသေးဘူးကောင်လေး လာဦးမှာ)…………”
~~~~~~~~~~ဒီအထဲမှာပါတဲ့ စာသားတွေက စိတ်ကူးသက်သက်ပါ…ထိခိုက်စေလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိပါ။ဒီလိုရေးရတာကို ဝါသနာပါတဲ့ သူမို့လို့ပါ။….မုဒိမ်းကျင့်တဲ့သူက သေဒဏ်ထိုက်ပါတယ်။ရှောင်ကျဉ်ပါ….။
ကျတော် ဇော်သွင် ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်